ဝါကျများအတွက် ဖိရွတ်သံ stress .. ဘယ်လိုရွတ်မလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
၀ါကျများအတွက် ဖိရွတ်သံ stress .. ဘယ်လိုရွတ်မလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Friday, October 02, 2015 SayarWinNaingOo No comments
Sentence stress ဆိုတာ ၀ါကျတစ်ခုထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေမှာ ဖိပြီး.. အသံမြှင့်ပြီး ရွတ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ သံစဉ်ညှိစည်းချက် အဖြစ်လည်း မကြာခဏ ယူဆလေ့ရှိပါတယ် ။
sentence stress is accent on certain words withinasentence. Often considered to be the "rhythm" of English.
Sentences - two types of words
၀ါကျ တစ်ခုမှာ stress နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ၊ ၀ါကျထဲမှာပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ဖိရွတ်ဖို့လိုတဲ့စာလုံးတွေနဲ့ မလိုတဲ့စာလုံးတွေကို ခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်
(1) Content words - stressed >> the main words ofasentence that have sense or meaning.
ပထမတစ်မျိုးက content word တွေဖြစ်ပါတယ် ၊ အဓိကစာလုံးတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ၀ါကျရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပေးချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းသဘောကို ဖေါ်ပြပါတယ် .. content word တွေကို “ဖိပြီးရွတ်ဆို” ရမှာဖြစ်ပါတယ် .. အဲဒါတွေကတော့
(1.1) main verbs – sell, give, employ
(1.2) nouns – car, music, mary
(1.3) adjectives – red, big, interesting
(1.4) adverbs – quickly, loudly, never
(1.5) negative auxiliaries – don’t, aren’t, can’t
ပထမ post မှာတုန်းက Adverb တွေအတွက် stress လုပ်ရမယ့်နေရာကို ပြောဖို့ကျန်ခဲ့တာလေးတစ်ခုကို ပြောပါမယ် ၊ adverb တွေကိုလည်း ယေဘူယျအားဖြင့် ပထမအသံပေါ်မှာပဲ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရပါမယ် ။ adjective ကနေ ဖြစ်လာတာတွေကျတော့ adjective တုန်းက stress အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်
Adverbs are usually stressed on the first syllable or repeat the stress of the adjectives from which they were derived: ANgry – ANgrily; WONderful – WONderfully; စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ် ။
မှတ်မိအောင်လို့ ကျနော်က note ပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်
ရှေ့ကအသံကိုဖိပြီးရွတ်ရမှာတွေက noun, adjective, adverb
နောက်ကအသံကို ဖိပြီးရွတ်ရမှာက verb , ထပ်ပေါင်းတဲ့ -ed တို့ -ing တို့ကို စဉ်းစားဖို့မလိုပါ
ဟိုက်ရှားဘား! ဒီလိုကျတော့လည်း လွယ်သလိုလေးပါလားနော်..
(2) Structure words – unstressed >> these are small, simple, not very important words that make the sentence grammatically correct.
ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ “ဖိပြီးရွတ်ဖို့မလိုတဲ့” Structure word တွေ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ၀ါကျတည်ဆောက်ဖို့ ထည့်ထားတဲ့ စာလုံးသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အထက်မှာတွေခဲ့တဲ့ content word တွေကို ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံအရ မှန်ကန်အောင် ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ချိတ်ကလေးတွေပါပဲ ၊ အဲဒါတွေကတော့ ..
(2.1) pronouns – I, he, she, we, they
(2.2) prepositions – on, at, into
(2.3) articles – a, an, the
(2.4) conjunctions – and, but, because
(2.5) auxiliary verbs – do, be, have, can, must
ခြွင်းချက်လေးတစ်ခုကိုလည်း တစ်ခါတည်း ထည့်ပြောခဲ့ချင်ပါတယ် ။ အချက်အလက်မှားနေတာကို ပြင်ဆင်ဖို့ ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ structure word ပေါ်မှာလည်း ဖိပြီးရွတ်ရတဲ့အခါတွေ ရှိပါတယ် ။
Exception - occasionallyastructure word is stressed to correct information.
“No, I haven’t, but he has.”
ဟင့်အင်းကျနော်မတွေ့မိပါဘူး ၊ သူတွေ့မိတယ်
(မေးသူက ကျနော် I တွေ့မိတယ်ထင်လို့မေးတာ ။ တကယ်တန်းက ကျနော်မတွေ့ဘဲသူတွေ့တာ ၊ အချက်အလက်က မှားနေတယ် ။ ဒါကို ပြင်ချင်တဲ့အခါ ကျနော် I မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ he ဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပြင်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်..ဒုတိယ ၀ါကျမှာ I နဲ့ he ကို ဖိပြီး ရွတ်ပေးရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ ။ ပုံမှန်အားဖြင့်က I, he တို့ဟာ pronoun တွေဖြစ်လို့ ဖိပြီးရွတ်ဖို့ မလိုပါဘူး)
(3) The time between each stressed word is the same.
နောက်စည်းကမ်းချက်တစ်ခုကတော့ ၀ါကျအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဖိသံတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားက အကွာအဝေး ကြာချိန်ဟာ တူညီရပါမယ်..တဲ့ ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ညီအောင်ညှိပြီးရွတ်ရပါမယ် ။ ပထမဖိသံနဲ့ ဒုတိယဖိသံ ကြားက ရွတ်ဆိုဖို့ကြာချိန်ဟာ တစ်စက္ကန့်ဆိုပါစို့.. အဲလိုပဲ ဒုတိယဖိသံနဲ့ တတိယဖိသံကြားက စကားလုံးတွေကို ရွတ်ဆိုဖို့ ကြာချိန်ဟာလည်း တစ်စက္ကန့်ပဲ ဖြစ်ရပါမယ် ။ ၀ါကျတစ်ခုထဲမှာ ဖိသံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားက စကားလုံးအရေအတွက်ဟာ အနည်းအများ မတူသည်ပဲ ဖြစ်စေ ကြာချိန်ကို တူအောင် နှေးဖို့လိုလျှင်နှေး မြန်ဖို့လိုလျှင် မြန်ပြီး ရွတ်ဆိုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ် ။
Example: Can you (do) the (dishes) after you have (finished) your (lunch)?
ဒီဝါကျမှာဆို do နဲ့ dishes ကြားမှာ အသံတစ်ခု (the) ပဲ ရှိပြီး dishes နဲ့ finishes ကြားမှာ အသံလေးသံ (af-ter you have) ရှိနေပါတယ် ။ အဲဒီမှာ the တစ်သံတည်းကို ရွတ်ဆိုရမယ့်ကြာချိန်ဟာ af-ter you have အသံလေးသံကို ရွတ်ဆိုရမယ့် အချိန်နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ဒါကြောင့် the ကို အသံဆွဲပြီး ဖြည်းဖြည်းဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး after you have ကို မြန်မြန်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
(There is one syllable between do and dishes and there are four syllables between dishes and finished. The time between do and dishes and between dishes and finished is the same.
This is because you say "the" more slowly and "after you have" more quickly.)
ဒါမှသာ ဟိုးရှေ့အဖွင့်မှာတုန်းက ကျနော်ပြောခဲ့သလို ဖိသံလေးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား ကြာချိန်ဟာညီတူပြီး အသံလေးတွေဟာ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ ညီညာတဲ့ သံစဉ်လှိုင်းကလေးတွေလို ဖြစ်သွားမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ် ၊ အဲဒါသည်ပင် ဘာသာစကားရဲ့ နရီစည်းဝါးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ Stress နဲ့ Unstress ဟာတစ်လှည့်စီပဲလာပါတယ် ။ နာမည်ကျော် Shakespeare ရဲ့ ပြဇတ်တွေမှာဆို တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းတွေမှာ Stress နဲ့ Unstress ဟာ (၅) ကြိမ်စီ (SU, SU, SU, SU, SU) လို့ လာလေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ video ပို့ချချက်မှာ မှတ်သားလိုက်ရပါတယ် ။ ကဲ အခုတော့ Stress တွေ ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ် ၊ ဘာကြောင့် နှေးလိုက်မြန်လိုက်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ .. ဆက်ရေးဦးမယ်နော်
မေတ္တာဖြင့် heart emoticon
Honor 4X (L11) B330 5.1 Lollipop Firmware တင်နည်း
Ascend P7 (L10) Full B832 Android 5.1.1 Lollipop F...
Huawei P8 (UL00) B180 5.0.1 Lollipop Stock Firmwar...
Programming ဆိုတာဘာလဲ ၄င်းကို စိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း
How to Remove Subscribe to Atom links from your Bl...
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်(၁၀၀)ထဲမှာပါတဲ့ ...မြန်...
LG Stock Rom Firmware များရယူပါ
All Stock Rom Firmware Oppo Smart Phone အားရယူပါ
Huawei Ascend P7 B832 Lollipop OTA Firmware တင်နည်...
Samsung Galaxy Win Duos GT-I8552 4.1.2 Jelly Bean ...
Galaxy Grand Duos GT-I9082L 4.2.2 ကို CWM & Root လ...
Galaxy Tab S 10.5 WiFi SM-T800 on Android 5.0.2 ကိ...
Samsung GALAXY Win DUOS GT-I8552B 4.1.2 Jelly Bean...
Samsung Galaxy Grand Prime (Dual Sim) SM-G530H Kit...
GALAXY Win DUOS GT-I8552B 4.1.2 Jelly Bean ကို Roo...
Samsung Galaxy S3 GT-I9300 / GT-I9300T များကို Roo...
Huawei Y511-U30 အတွက် Flash Tool Firmware တင်နည်း
Elephone Stock Rom for all models များနဲ့ တင်နည်း
Huawei P8 Lite (ALE-L23) Stock B140a Lollipop Firm...
Huawei Ascend G6-U251-B116 ကို Official Firmware တ...
Ascend Mate2B850 Lollipop Firmware L01/L02/L05/C...
ZenFone2Laser (ZE550KL) 1.13.40.496 Android: v5....
Samsung Galaxy J2 ကို ကွန်ပျူတာ/ဖုန်း နှစ်မျိုးဖြင...
Samsung GALAXY A3 SM-A300FU Lollipop 5.0.2 တင်နည်း...
Samsung GALAXY S4 mini GT-I9190 Official KitKat 4....
Microsoft .NET Framework 4.6 Final x86-x64 Offline...
Format Factory 3.8.0.0 - latest version
Windows 8 မှာ အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် စစ်ဆေးနည်း နှင့်...
ငွေမကုန်စေသော ဆီးချိုပျောက်ဆေး တစ်ခွက်
ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းမထားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၇)မျိုး
မျက်ခုံးတွေ ဘာလို့ လှုပ်နေတာလဲ၊ မျက်ကွင်းတွေ ဘာလို့...
ROOT Samsung Galaxy E5 ( SM-E500H ) version 4.4.4 ...
LENOVO A536 Lastest Firmware
Samsung Galaxy Mega 6.3 LTE ( GT-I9205 ) Lastest F...
Root Lenovo A 2010 How to root rooting 2015
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က Porn Video ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်...
Google Play Store 5.9.12 Patched + Installer
Samsung ဖုန်းတွေ Unlocker လုပ်နိုင်မယ့် Unlocker V...
HTC ဖုန်းတွေအတွက် Unlocker V1.7
Android Firmware Backup ပြန်ဆွဲထုတ်နည်း
Root Samsung Galaxy J2 How to root rooting 2015
Mobile Software Service box crack tools စုစည်းမှု ...
Hardware ပိုင်းကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ iFixt Application
Unlock Samsung Galaxy S5 mini, SM-G800F, SM-G800H
ထိုင်းကျောင်းသူ အသတ်ခံရမှု သံသယဖြင့် မြန်မာ လှေလုပ်...
မန်မာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို သြစတြေးလျက ဒေါ်လာ ၄...
APK Editor Pro v1.3.18 Apk Full Version
Root Explorer v3.3.7 Apk Pro Latest Version
English Listening Practice apk v1.1 for English St...
သက်တမ်း 2020 ထိအသုံးပြုနိုင်မယ့် Antivirus အကောင်း...
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၁၆)
All ကိုကြိယာတွေနဲ့ တွဲရေးတဲ့အခါ သတိထားပါ
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၁၃)
အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ ၁၀၀ Level (1) Lesson (20)
“go” ကိုသုံးတဲ့ နည်းလမ်း (၆) သွယ် မှတ်ကြမယ်
အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ ၁၀၀ Level (1) Lesson (19)
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၁၀)
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၉)
အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ ၁၀၀ Level (1) Lesson (16)
(၁၀) မျိုး ပြည့်အောင် ရယ်ဖူးကြပါသလား
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၈)
AppMgr Pro III (App2SD) v3.70 Apk
MM Aio Font Changer Pro Apk
Photo Studio PRO v1.10.5 Apk
VideoShow Pro – Video Editor v4.8.5 Apk
Android ဖုန်းရဲ့ Memory Space အတွက် ဆောင်သင့်တဲ့ အ...
MTK SP Multi Port Download Tool (all versions) အား...
Samsung Galaxy Grand Duos GT-I9082 4.2.2 Official ...
HUAWEI G730-U00 အတွက် Flash Tool/Firmware/CWM/ Fas...
YOUTUBE ကဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းနိုင်တဲ့ -SNAPTUBE – Y...
Copy My Data.Apk
Sony Xperia ဖုန်းများအတွက် Android 5.0 အထက် Firmwa...
Android 5.0 အထက်ဖုန်းတွေအတွက် Lollipop Myanmar Fon...
iOS9တွင် WiFi Assist ကို ပိတ်ထားခြင်း
Samsung Kies3ကိုအသုံးပြုပြီး Firmware Upgrade ပြ...
i Device မှ Data များကို Android သို့ One Clickြ...
Firmware ဆိုတာဘာလဲ/ Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ (မြန်မာလ...
Huawei Mobile Flash File များတစ်နေရာတည်းရယူပါ
Lenovo Mobile Flash File များဒေါင်းလော့ရယူပါ
Moto E XT1022 ကို Lollipop Update တင်နည်း
Android ဖုန်းထဲမှာတင်One Click နဲ့Root ပေါက်လိုတဲ့...
AVG Internet Security 2016 Serial Keys are Here ! ...
Root Cleaner v4.1.2 Cracked APK
Huawei G620S-Ul00 ဖုန်းများအတွက် Root လုပ်နည်း Fir...
Battery Indicator Pro v2.4.4 APK
Zen Mobile Flash File များကိုတစ်နေရာတည်းဒေါင်းလော့...
Advanced Uninstaller အသုံးပြုနည်းနှင် Programs and...
လှပြီးလန်းတဲ့ အနီနှင့်အပြာ Drop Down Menu (For Blo...
Coolpad 7060s-s40 firmware .. (rar pass တောင်းထားသ...